sex « Lokpath
२०७६, ७ भाद्र शनिबार १४:३३
यी हुन् यौन सम्पर्कका लागि सबैभन्दा ‘खतरा’ तरिकाहरु, हेर्नुहोस्
काठमाडौं । शारीरिक सम्पर्क मानव जीवनको एक महत्वपूर्ण पाटो हो । दाम्पत्य जीवनमा शारीरिक सम्पर्कले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यसैले यौनका विषयमा आधुनिक मनोबैज्ञानिकहरुले विभिन्न पुस्तक लेखेका छन् । शारीरिक
नेपाली महिलाहरु बत्ति बालेर शारीरिक सम्बन्ध राख्न नचाहनुको कारण यस्तो !
नेपालीहरु बत्ति बालेर तथा नाङ्गो भएर सेक्स गर्न चाहँदैनन् । यस विषयमा लामो समयको अनुसन्धान गरिरहेकी मनोविद् करुणा नेपाली यौन मनोविज्ञान जटिलतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको स्वीकार गर्नुहुन्छ । नेपालीहरुको यौन
विवाहको अर्थ दुई व्यक्ति एक हुनु मात्र नभएर उनीहरुको विश्वास, एकअर्काप्रतिको सम्मान, माया, प्रेम र दुई परिवारप्रतिको दायित्व पनि बराबर हुनु हो । तर कहिलेकाहीँ विवाह अगाडीको कुरालाई लिएर विवाद
कञ्चनरुपमा १५ शैयाको अस्पताल शिलान्यास
रेड ड्रेसमा सारा : मूल्य कति पर्छ ?
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण…